» एमालेमा नयाँ नेतृत्व चयनका लागि आज चुनाव हुने, कसले अध्यक्षमा बाजि मार्ला? रावल? ओली?,,,, एमालेमा नयाँ नेतृत्व चयनका लागि आज चुनाव हुने, कसले अध्यक्षमा बाजि मार्ला? रावल? ओली?,,,, – हाम्रो खबर
हाम्रोखबर संवाददाता 74 Views
काठमाण्डाै – नेकपा ए¥मालेको अध्यक्षका लागि केपी शर्मा ओली र भीम रावलबीच चुनाव हुने नै निश्चित भएको छ ।हिजो दिनभर र राति अबेरसम्म पनि नेताहरुसँग छलफल गरेर ओलीले रावललाई उपाध्यक्षमा बस्न आग्रह गर्नुभएको थियो ।
चितवनको सौरा¥हामा राति अबेर सुरु भएको बन्द सत्रमा ३०१ जना केन्द्रीय सदस्यको नाम प्र¥स्ताव गरेर उहाँले रावललाई उपाध्यक्षमा बस्न प्रस्ताव गरे पनि रावलले अस्वीकार गर्नुभएको छ।
रावललाई म¥नाउने प्रयास अ¥सफल भएपछि आज चुनाव गर्ने तयारी भएको छ ।निर्वाचन प्रक्रिया हिजै सुरु हुने कार्यतालिका भए पनि यसमा हेरफेर गरिएको छ । आज बिहान ८ बजेदेखि चुनावी प्रक्रिया सुरु हुनेछ । रावलले उम्मेदवारी दर्ता गराउन राति नै फारम लैजानुभएको छ ।
यो पनी,,,”गुटको हस्ताक्षर मान्दिन,स्वच्छ प्रतिस्पर्धा मेरो मान्यता हो”-भिम रावल,,चितवन — नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष भीम रावलले गुटबन्दीपूर्ण तरिकाले केन्द्रीय समितिको सूची तयार पारेर घोषणा गर्ने कुरा अलोकतान्त्रिक भए¥को प्रतिक्रिया जना_एका छन् । इकान्तिपुरसँग कुरा गर्दै उपाध्यक्ष रावलले केन्द्रीय सदस्यको सूची तयारीबारेमा आफूलाई जानकारी नभएको भन्दै त्यसमा सहमति हुन नसक्ने बताए ।
‘गुटबन्दीपूर्ण तरिकाले तयार भएको होला । मलाई त्यसको जानकारी छैन । सूची त¥यार पारेर घोषणा गर्ने कुरा अलोकतान्त्रिक, टीके प्रणाली हो । त्यो हुन सक्दैन । त्यसमा सहमति हुन्न,’ उनले भने ।
रावलले महाधिवेशन प्रतिनिधिको सार्वभौम अधिकारको सम्मानका लागि तत्काल निर्वाचन प्र¥क्रिया थाल्नसमेत माग गरे ।’महाधिवेशनका सम्पूर्ण प्रतिनिधिको सार्वभौम अधिकारको सम्मान हुनुपर्छ । नि¥र्वाचनको प्रक्रिया आरम्भ हुनुपर्छ ।
बिहान १० बजेदेखि सुरु गर्ने भनिएको बन्दसत्र साढे ५ बजेसम्म सुरु नगर्नु, कोठाभित्र बसेर गुटबन्दी गर्नु । यो लोकतन्त्रको उपाहास हो । पार्टी नीतिको उपाहास हो । सयौं मान्छेलाई अलपत्र राखेर केही मान्छे कोठामा बसेर महाधिवेशन अनिर्णयको बन्द बनाएको छ । यो आपत्तिजनक छ । यस¥ले पार्टी बलियो हुँदैन ।’
पार्टी नेतृत्वले धाँधलीको अ¥भ्यास गरेको र मनपरी गर्ने काम गरिएको भन्दै यसले कम्युनिस्ट पार्टीकै उपाहास भएको उनको टिप्पणी छ । रावलले आफूले अध्यक्षमा दिने भनेको उम्मेदवारी कायम रहेको पनि बताए ।
‘मेरो उम्मेदवारी का¥यम छ,’ निर्वाचन प्रक्रिया नथालेकोमा आक्रोशित हुँदै उनले भने, ‘उम्मेदवारी दिन नपाउने कस्तो लोकतन्त्र हो ? कस्तो खालको कम्युनिस्ट पार्टी हो । अनि देश हाँक्छु भन्नु कुनै मान्छेलाई सुहाउने कुरा हो यो ? लोकतान्त्रिक प्रणाली मान्ने हो भने एमालेभित्र तुरुन्त निर्वाचन प्रक्रिया आरम्भ गर्नुपर्छ ।’